အံ့ဩခြင်း Iron Man ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ကံကြမ္မာ '' Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ '၌ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့ပုံကိုထင်ရှားခဲ့ပါသည် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "အံ့ဩခြင်း Iron Man ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ကံကြမ္မာ '' Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ '၌ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့ပုံကိုထင်ရှားခဲ့ပါသည် - BGR
ဟုတ်ပါတယ်, တိုနီ Stark ခေါ် Iron Man သေဆုံး Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ရုပ်ရှင်၏အရှိဆုံးကှေဲဖှယျအချိန်လေးထဲကတစ်ခု marking ။ ဒါကရုပ်ရှင်က၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကထက်ပိုသုံးလရှိခဲ့ဖူးသောစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပရိသတ်ကိုပေးထားသောတစ်ဦးလုယူသောသူဖြစ်သင့်သည်။ ယခု နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ် format နဲ့ရရှိနိုင်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူ ရုပ်ရှင်အပေါ်ပိုပြီးလျှို့ဝှက်ချက်များ de မှတ်ချက်အတွက် အရာ Blu-ray ဗားရှင်းအဖြစ်အံ့ဩခြင်းအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူအခြားအအင်တာဗျူးများအတူ။ ယခုမှာကျွန်တော်အတိအကျသိနှင့် Iron Man ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သောအခါ။
ကျနော်တို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည် စစ်ပွဲအသင်္ချေ et surtout နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ငါတို့သည်ငါတို့၏အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းတချို့၏အသေခံခြင်းမသင်္ကာ။ ဤအသေဆုံးမှုအမြဲတမ်းပါလိမ့်မယ်။ တိုနီ Stark နဲ့ Steve Rogers ဟာသူတို့ရဲ့ရှည်လျားသမိုင်းနှင့်အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏အရေးပါမှုပေးသောအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြားခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းဆောင်များ Avengers ကြီးမားတဲ့ဒီကျော်အံ့မခန်းမုတ်ပေးအပ် Saga အသင်္ချေ MCU သူတို့ရဲ့ output ကိုအနိုင်ရတဲ့နှစ်ဦးစလုံး။ ယခု နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ အတိတ်ကာလ၌တည်ရှိ၏ကျနော်တို့ MCU Adventures ရဲ့နောက်အဆင့်မှာရှာကြသည်, ငါတို့နှစ်ဦးသည်သူရဲကောင်းများအငြိမ်းစားခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးသေဆုံးပြီးအခြားတစ်ဦးအတော်လေးပျော်ရွှင်ဘဝအနားယူနှင့်ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့ကြရသည်။
စကားပြော အင်ပါယာမဂ္ဂဇင်း နှင့် ဆက်စပ်. နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ၏ အံ့ဩခြင်း, ကီဗင် Feige သမ္မတ Iron Man ရဲ့သေခြင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ နောက်ကျောဒီဇင်ဘာလ 2015 ့ပြီးနောက် Captain America: ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဦးကိုရုပ်ရှင်အဘို့အစီစဉ် Avengers အံ့ဩခြင်းအတော်ကြာ key ကိုအမှုဆောင်အရာရှိအဆိုပါဂိမ်း၏အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်တွေ့ဆုံခဲ့ရာစဉ်အတွင်းတစ်ဆုတ်ခွာနေမှာအကြောင်းကိုငါးနှစ်ရှိပါတယ်စတင်ခဲ့ပြီး:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယအငြိမ်းစား, ဖြစ်ကောင်းငါးနှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပေါ်ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အကြောင်းပြောနေတာစတင်ခဲ့သည့်အခါ ပို. ရှိပါသည် Infinity စစ်ပွဲ et နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ။ အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုဒီခရမ်းရောင်ခရမ်းရောင် Joss ပြန်ဆပ်ဖို့ [Whedon] Avengers ရဲ့အဆုံးမှာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ငါတို့သည်ထိုအမယုံနိုင်စရာ Infinity ကျောက်ခဲ interweave နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့အားတစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကားအတွက်အံ့သြစရာ macguffins များကိုစတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျအတူတူသူတို့ကိုထားလိုက်တဲ့အခါကျနော်တို့ကပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်။ ထိုအခါငါတို့သည်ယင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်ရာ, တစ်ပြိုင်နက်ဇာတ်ကားနှစ်ကားလုပ်နေတာ၏ထင်ကဒီဆုတ်ခွာနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအံ့ဩခြင်းကြောင့်အချိန်မထိန်းချုပ်ခဲ့ဘူး, တိုနီရဲ့ကအခြားဂုဏ်သတ္တိများများလွှတ်ပေးရေးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့အထဲကပြန်သွားလေ၏။ ဤသူကား X-Men အထူးသဖြင့်, Logan :
ကျနော်တို့မြင်ကြပြီ Logan ပရိသတ်ကိုအဖြစ်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်မင်းသား Hugh မှ '' အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျအိုးအဘယ်အရာကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဆုံး, ရုပ်ရှင်၏ဖန်တီးမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိခြင်းဟာပြဇာတ်ရုံထဲမှာပြုသွား၏။ နှင့်လည်းဇာတ်ကောင်နဲ့ဆက်စပ်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင်ဿုံထွက်ရနိုင်ဘယ်မှာမှသာအနည်းငယ်ဥပမာရှိပါတယ်။ နှင့် Logan ယခုအချိန်တွင်အဘို့, သူတို့မြောက်မြားစွာမဟုတ်စိတ်ထဲမှကြွလာသောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကျနော်တို့ရောဘတ်ဖို့အသည်းအသန်လိုချင်ခြင်း, သောငါတို့အလုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုခဲ့တယျ။
နစ်ခ် Fury ထဲမှာသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကွယ်လွန်ဖြစ်ပါတယ် ဆောင်းရာသီ Soldier တို့နှင့်ကြီးသောခဲ့သည့်တတိယလုပ်ရပ်အတွက်ပြန်လာပေမယ့်တစ်ဦးအသေခံမဟုတ်ဘူး။ လူတွေကလည်းအသေခံခြင်းမဟုတ်သေချာပေါက်, လိုချင်ပေမယ့်ကိစ္စများနှင့်အစစ်အမှန်စိတ်ခံစားမှု။ "သင်ဆန္ဒရှိသောအရာကိုသတိထားပါ" ကျနော်တို့ကခါနီးအဖြစ်: ထိုအခါငါစဉ်းစားသတိရပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဖူးဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းတို့နှင့်အားထုတ်မှုကျိုးနပ်ဆင်းသက်စေပြီ။
Robert Downey Jr. များအတွက်သကဲ့သို့, မင်းသားတိုနီအသေခံမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ 2015 ကတည်းကသိတယ်:
ငါထင်, ဖြစ်ကောင်းဒီဇင်ဘာလ 2015 အတွက် Robert Downey Jr. မှမိတ်ဆက်ခံရသတိရပါ။ ငါအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအတွက်နောက်ဆုံးဖို့စိတ်ကူးပေးအပ် Avengers et Spider-Man: Homecoming သောသူတို့၏အကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာတချို့အချိန် ယူ. , ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအားလုံးကိုစုဝေးရောက်လာကြ၏။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးမှာဒီခရီးအဆုံးသတ်ကြောင်းမထင်ထားဘူးထင်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးရေးနီးကပ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအတှကျနှင့်အထူးသဖြင့်သူ့အဘို့တကယ်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
Netflix နဲ့မှကြွလာမည်သို့ပင်ယခုအပတ်အပေါင်းတို့နှင့်ကြောင့်လက် (11 သြဂုတ်လတပတ်) - BGR